Ungazenzela Kanjani Ukubukeka Okumangazayo Kwezindaba ze-Instagram | Martech Zone
I-Instagram inabasebenzisi abakhuthele abangaphezu kwezigidi ezingama-500 usuku ngalunye, okusho ukuthi okungenani uhhafu wesisekelo somsebenzisi jikelele sokubukwa kwe-Instagram noma ukudala izindaba nsuku zonke. Izindaba ze-Instagram ziphakathi kwezindlela ezinhle kakhulu ongazisebenzisa ukuxhumana nezithameli zakho ezibhekiswe kuwe ngenxa yezici zayo ezinhle ezihlala zishintsha. Ngokwezibalo, amaphesenti angama-68 weminyaka eyizinkulungwane athi abuka ama-Instagram Stories.
Ngenombolo ephezulu yabasebenzisi abalandela abangane, osaziwayo, nebhizinisi, singacabanga ukuthi abasebenzisi abaningi badla okuqukethwe okuningi kwebhizinisi nakho konke okunye okuhlinzekwa yipulatifomu. Ukuxhuma nokuheha izithameli zakho, udinga ukuthi dala izindaba ezihehayo ze-Instagram lokho kugqame ngokubonakalayo. Nawa amathiphu wokuklama ayisishiyagalombili angakusiza ukuthi udale ukuheha okwengeziwe, ukubukeka okumangalisa, nokubandakanya izindaba ze-Instagram.
Sebenzisa i-Animated Graphics
Ngokwezibalo, okuthunyelwe kwamavidiyo kuvame ukuthola ukubandakanyeka okungamaphesenti angama-38 uma kuqhathaniswa nokuthunyelwe kwezithombe. Ngakho-ke, uma uhluleka ukuthumba izithameli zakho kumasekhondi amane okuqala wokubuka, ungalahlekelwa ngokuphelele intshisekelo yazo. Ukungeza izithombe ezithombeni zakho ingenye yezindlela ezinhle kakhulu zokufaka ukunyakaza nokugcina ababukeli bakho behlanganyela.
Kodwa-ke, uma ungenakho okuqukethwe kwevidiyo, ungangeza ukugqwayiza ezithombeni zakho noma udale ukugqwayiza okuhlukile. I-Instagram ifaka amanye amathuluzi akhiwe ngaphakathi ongawasebenzisa, njengegalari ye-GIF engenamkhawulo noma izingoma ezigqwayizayo. Ngaphezu kwalokho, ungasebenzisa futhi umuntu wesithathu Amathuluzi we-Instagram wemiphumela emihle kuma-social media.
Dala Ibhodi Lezindaba
Ungasebenzisa izindaba ze-Instagram ngezindlela eziningi ezahlukahlukene. Ukusuka ekwabelaneni ngezici ezintsha ukukhuthaza okuthunyelwe kwakho okusha kwebhulogi, lezi zindaba zikunikeza indlela emangalisayo yokuzibandakanya nemakethe yakho oyikhokhile ngaphandle kokuyipholisha njengokuphakelayo kwakho. Lokho kusho ukuthi ungathatha izithombe ezisemuva kwezigcawu, izithombe ze-smartphone, futhi uphile amavidiyo ngaphandle kokukhathazeka ukuthi kuyahambisana yini nokunye okuqukethwe onakho. Noma kunjalo, uma kukhulunywa ngemidwebo yezindaba zakho ze-Instagram, udinga ukuqinisekisa ukuthi udala ukwakheka okubukekayo okuheha ababukeli bakho ukuthi bashune. Enye yezindlela ezingcono kakhulu zokukufeza lokho ukusebenzisa ibhodi lezindaba ukuhlela izindaba zakho ngaphambi kokuqala ekwakhiweni.
Ibhodi yezindaba ikusiza ukuthi uhlele okuqukethwe okufanele ukuthumela bese uhlela okuqukethwe ngendlela ongathanda ukuthi ikhonjiswe ngayo. Lokho kuyasiza ekuqinisekiseni ukuthi indaba yakho ye-Instagram igeleza kahle futhi igcina ababukeli bakho behlanganyela. Ibhodi yezindaba nayo ibalulekile uma uvame ukubeka imbondela yombhalo ezindabeni zakho ngoba iqinisekisa ukuthi izindaba zakho zihlala zihlangana.
Faka phakathi izithombe
Indaba yakho ye-Instagram akudingeki ukuthi ibe nemidwebo yemidwebo yangokwezifiso kuphela. Ungazishintsha futhi ufake izithombe ngezikhathi ezithile. Into enhle ngezindaba ze-Instagram ukuthi konke okushicilelayo akudingeki ukuthi kudalwe ngobungcweti noma kube sezingeni eliphakeme. Esikhundleni salokho, ungasebenzisa ikhamera ye-smartphone yakho ukuthwebula izithombe eziseceleni kwesicelo. Ngaphezu kwalokho, kunezigidi zezinketho zamahhala zokuthwebula ezitholakalayo ukuze zisetshenziswe nazo. Udinga kuphela ukukhetha izithombe ezihambisana nokuqukethwe owabelana ngakho futhi ezihambisana nenkampani noma nomkhiqizo wakho.
Sebenzisa Imibala Yakho Yomkhiqizo Namafonti
Lapho ukhangisa inkampani yakho noma imikhiqizo, udinga ukugcina yonke into oyithuthukisayo kumkhiqizo, kufaka phakathi izindaba zakho ze-Instagram. Ngakho-ke, udinga ukuthi ube ne- gcwalisa ikhithi yomkhiqizo ngaso sonke isikhathi ukuhamba nelogo yakho, amafonti, namakhodi we-hex, phakathi kwezinye izinto. Kufaka imibala yakho yomkhiqizo namafonti kusiza kakhulu ngokuqashelwa komkhiqizo, ikakhulukazi lapho izethameli zakho zidlula ezindabeni. Ukunamathela kuphalethi yombala othize kuzo zonke izindaba zakho ze-Instagram kubalulekile ekukhuleni komkhiqizo. Akunandaba noma ngabe wakha uphawu lomuntu siqu, noma unebhizinisi, ukugcina isikimu sakho sombala kungaguquguquki kubalulekile. Sebenzisa iphalethi yombala ngokuhlakanipha nangobungcweti ukuthuthukisa ukubukeka kwehluzo zakho zezindaba ze-Instagram. Lapho ababukeli bakho sebebone imidwebo yakho, bangazi ngokuzenzakalela ukuthi ingeyenhlangano yakho ngaphandle kokubona igama lakho lomsebenzisi.
Faka Izithunzi Zombhalo
Udinga ukwenza ubuciko ngezimpahla zangaphakathi nohlelo ezinikezwe yi-Instagram ukudala ukubukwa okuhehayo kuzo zonke izindaba zakho ze-Instagram. Ungafaka izithunzi zombhalo kudeshibhodi yokwakha izindaba ngokufaka izingqimba ezimbili zemibala ehlukene embhalweni ofanayo. Ungakuthola lokho ngokuthayipha umbhalo wakho ngomthunzi omnyama noma okhanyayo bese uwubeka ngaphezulu kwesithunzi usebenzisa i-engeli encane. Leli thiphu liyindlela ethokozisayo yokwengeza umbhalo ngaphezulu kwevidiyo noma isithombe osithwebulayo kuhlelo lokusebenza, okwenza kube lula futhi kusheshe ukudala indaba yakho ye-Instagram ngaphambi kokuyishicilela.
Dala ukunqwabelanisa Nezizinda
Ithuluzi lokudweba elinikezwe uhlelo lokusebenza lwe-Instagram lingenza okungaphezulu kokugqamisa nokufaka umbala umbhalo endabeni yakho. Leli thuluzi elihlukile lingakusiza nasekwenzeni imbondela yombala nezizinda ezithuthukisa ukubukeka kwezindaba zakho. Uma uhlela ukwabelana ngezimemezelo ezithile ezibalulekile endabeni yakho ye-Instagram ngaphandle kokuthola isithombe ongasisebenzisa, ungavula ithuluzi lepeni, uthole umbala ongemuva owufunayo bese ucindezela bese ulibamba kuze kube yilapho isikrini sonke siphenduka lowo mbala.
Ngaphezu kwalokho, ungakha imbondela ekhanyayo ngokusebenzisa ithuluzi lokugqamisa lenqubo efanayo. Ungakha futhi ama-sneak peeks ngokufaka umbala ongemuva ngaphezulu kwezithombe zakho bese uhambisa ithuluzi lokusula ngaphezulu ukuze uqede eminye imibala futhi uthuthukise izithombe zakho. Uma udinga izizinda nokumbondelana okwenziwe ngobungcweti ungaxhumana nabakhi bewebhusayithi abangakwenzela kona. Ungathola imininingwane eminingi ngabo lapha, uma ungazizwa ukhululekile ukuzenzela ngokwakho.
Sebenzisa ama-GIF Nezitika
Izindaba ze-Instagram zikunikeza izitika eziningi ezahlukahlukene nezinketho ze-GIF ukuletha umuzwa wesitayela namahlaya kumiklamo yakho. Ungasesha okuthile okuthile noma uskrole izinketho ezahlukahlukene ongangeza ezindabeni zakho ze-Instagram. Kunezindlela eziningi zezitayela zezithonjana, futhi ungafaka nezitika ze-hashtag, i-Q & As, imibuzo, nama-polls ukuthuthukisa ukubonakala kokubonakalayo kwakho nokugcina izethameli zakho zibandakanyekile. Ungakha futhi uthumele ama-GIF akho kanye nezitikha ukuze izibukeli zizengeze ezindabeni zazo noma zinikeze ukufinyelela okulula kumkhiqizo wakho.
Ukwakha izindaba ze-Instagram zokudala nezikhangayo kuyingxenye ebalulekile yebhizinisi lakho noma uhlobo lomuntu siqu. Noma ngabe ungumfanekiso, umdwebi wevidiyo, umthwebuli wezithombe, noma usomabhizinisi omncane, ukudala izindaba ezinhle nezivelele ze-Instagram kungakusiza ukuthi usabalalise umyalezo ngamakhono akho amahle futhi ukhombise umsebenzi wakho kuzethameli ezinkulu. Amathiphu okukhulunywe ngawo ngenhla angakusiza ukuthi wakhe ihluzo ezisezingeni eliphakeme ezizobamba ababukeli bakho kuzo zonke izindaba zakho ze-Instagram.
Tags: gif animatedama-animated ama-gifsiziphoamathiphu wokuthengisa we-instagramIzindaba ze-instagramIzizinda zezindaba ze-instagramUkufakwa uphawu kwendaba ku-instagramamafonti endaba ye-instagramIndaba ye-Instagram imbondelanaIndaba yezithombe ze-instagramIzitika zezindaba ze-instagraminstagram indaba yombhalo izithunziIbhodi lezindaba le-instagramibhodi lezindabaimibono
Misa Ukubuyekeza Iminyaka Ebhizinisini Esizeni Sakho se-WordPress ngale Shortcode